HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 27-JULY 2021
Tuesday July 27, 2021 - 12:18:01 in Wararka by Mogadishu Times
Ra’iisul wasaare Rooble oo kusii jeedda London
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaal ka Soomaaliya Md.Maxamed Xuseen Rooble iyo Wefdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada London ee dalka Britain.
Waxaa uu halkaas uga qeyb gali doona Shi rka Caalamiga ah ee sara u qaadista tayada waxbara shada carru urta Wasiiro ka tirsan xukuumadda Sooma aliya ayaa ku wehliya Safarka.
Ra’iisul Wasaaraha inta joogo UK waxa la kulmi doonaa Ra’isulWasaaraha UK Boris Joh nson , Madax iyo Mas’uuliyiin kale.
QM oo war ka soo saartay tallaabadii uu qaaday Rooble
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Qa ramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey tallaabadii uu Dorraad.
qaaday Ra’iisul Wasaare Ro oble ee uu ku magacaabay guddiga ilaalinta qoondada haweenka ee 30%, inta lagu guda jiro howlaha doorashoo yinka dalka. Qoraalka Qaramada Midoobey ay aa lagu balan qaaday inay sii taageeri doonaan haweenka Soomaaliyeed, si qoondadooda ay u helaan matalaadooda.
"Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhoweyneysaa magacaabista uu Shalay magacaabay R/Wasaare M.Xuseen Ro oble,13 xubnood oo ah guddi u qareemis, kaas oo ka shaqeynaya xaqiijinta qoondada haween ka ugu yaraan 30% ee kuraa sta baarlamaanka federaalka ay haween ku ku yeelanayaan,” ay aa lagu yiri warkaan ka soo baxay QM.
Qoraalka ayaa intaas ku sii daray, "QM wa xa ay ku celineysaa taageeradeed buuxda ee ka qeybgalka haweenka Soomaaliyeed iyo met alaadooda doorashooyinka soo socda.”
R/w/re XFS Soomaaliya Md. Rooble ayaa Dorraad magacaabay guddi ka kooban 13 xubno od, kaas oo ka shaqeyn doo na xaqiijinta qoond ada haweenka inta lagu gu da jiro doorashooyi nka dalka.
13-ka xubnood ee uu ka kooban yahay gu ddigaas hal ka mid ah waa rag, halka inta kale ay yihiin haween, waxaana guddoomiye looga dhigay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ku magacaaban guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed.
Hoos ka akhriso magacyada guddigaas
Soomaaliya & Mareykanka oo ka wada hadlay amniga doorashooyinka
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Jen. Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa Safa aradda Mareeykanka ee M/Muqdisho kula kulm ay Madaxa Siyaasadda iyo Nabadgelyada, Saf aaradda Mareey kanka Wendy Sta ncer.
Kulanka oo ay goobjoog ka aha ayeen masu uliyiinkale oo kati rsan Safaarad da ayaa lo oga hadl ay arimaha amni ga doorashooyin ka iyo mashaar iicda ay islawad aan Safaarad da Mareeykanka iyo Ciidanka Booliiska Soo maaliyeed.
Madaxa Siyaasadda iyo Nabadgelyada, Saf aaradda Mareeykanka ee Soomaaliya Wendy Stancer ayaa sheegtay in dowladda Mareykan ka ay diyaar u tahay inay Soomaaliya ka caa wiso dardar gelinta howlaha doorashooyinka oo uu amniga ugu weyn yahay.
Taliyaha CBS Jen. Xijaar ayaa dhan kiisa do wlad da Mare ykan ka uga mahad celiy ay taa geerada ay had iyo jeer siiya an dowladda So omaaliya, isaga oo sheegay inay muhiim tahay inay laba jibaaraan taageeradaas.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in dalka Soomaliya ay ka bilaawdaan doorasho oyinka Aqalka sare, waxaana Goobaha lagu qa banayo doorashada amnigeeda sugaya Ciida mada Booliska dowladda Soomaaliya, kuwa dowlad Goboleedyada iyo Booliska AMISOM.
Cabdi Cali Raagge oo Shalay gaaray magaalada Kismaayo
La taliyaha Arrimaha Doorashooyinka Mad axweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed C/hi Farmaajo ayaa Shalay ka dagay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo. Siyaasiga Cabdi Ca li Raagge ayaa maalma ka hor hawada gobolka Jubbada Hoose laga celiyay di yaarad uu saa rnaa ka dib markii loo diidday inay ka soo dago Garoonka Sayid Maxamed Cabdu lle Xasan ee Kismaayo.
Cabdi Cali Raage ayaa tegi sti isa magaalada Kismaayo ka dam beysay kadib markii dhaw aan R/Wasaare Rooble uu soo saaray amar inaan muwaadin Soomaaliy eed la ga celin karo mag aalo ka mid ah dalka Sooma aliya.
Cabdi Cali Raage ayaa ka mid ahaa ragga u gu saameynta badnaa Jubbaland intii u dhaxey say 2012 illaa 2018, xilli waxaa jirtay in wax uus an isaga ogeyn laga sameyn karin Jubbaland, maadaama uu ahaa gacanta midig ee Axmed Madoobe, isla markanaa la xusuusto in doora shadii 2016 kuraasta qaar ee Xildhibaanada u adeegsaday awooddo siyaasadeed.
Sanadki 2018 ayay is khilaafeen isaga iyo Axmed Madoobe, waxaana laga qaaday La Tali yenimadii dhinaca siyaasadda, waxaana uu ka mid noqday La Taliyeyaasha Villa Somalia, isa goo abaanduul ka ahaa qorshihii siyaasadeed ee ka dhanka ahaa Maamulka Axmed Mado obe. Waxaa Dorraad gaaray gobolka Gedo gud doomiyihii hore ee gobolka Gedo Macalimuu oo hore loogu diiday inuu gaaro magaalada Garb ahaareey.
Duqa Muqdisho oo kormeeray wadooyin uu biyo dhigay Roobka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa M/ Muqdisho Md.Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kor meeray waddada Daalo oo ka mid ah waddooy inka uu saameeyay roobab kii maa lmihii lasoo dhaafay ka da’ay M/ Muqdisho.Kormeerkan wa
xaa duqa/Muqdisho ku We hlinaaye G/ ku-xig eenada Maamulka G/Banaadir, taliyaha qey bta guud G/ Banaadir ee ciidanka Boliiska Soo ma aliyeed iyo taliyaha ciidanka ilaalinta wadoo yin ka ee Boliiska.
Sidoo kale masuuliyiintan iyo saraakiisha amniga ayaa kormeeray xaafadaha ku teedsan Waddada Daalo si ay ugu kuurgalaan shaqada ay dowlada Hoose Xamar ka waddo Wadadaas oo kamid ah kuwa ugu Muhiimsan ee Caasim adda.
Guddiyada Doorashooyinka Heer Feder aal & Heer Dowlad Goboleedka Jubbaland oo kulan yeeshay
Waxaa M/Kismayo ee Xarunta G/Jubbada Hoose kulan ku yeeshay Xubnaha Wafdiga Gu ddiga doorashooyinka heer Fede raal iyo Xubn aha Guddiga doora shooyinka Heer D/G/ Jubba land.G/Guddiga Hirgalinta doorasho oyinka he er Faderaal Maxamed Xasan Cirro iyo xubnaha Guddigiisa ayaa kala hadlay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka he er D/Goboleed ee Jubaland arrimaha doorash ooyinka heer Jubbaland, iya ga oo iska xog-war eystay xaalada dalka iyo doorashooyinka.
Guddiga doorashooyinka heer Faderaal & ku wa D/Goboledka Jubbaland ayaa isla qaatay in la dardargaliyo howlaha doorashooyinka oo si weyn ay indhaha ugu hayaan bulshada So om aaliyeed iyo aduunka oo dhan.
D/G/Jubbaland ayaa isku diyaarinaya inuu noqdo maamul Goboledkii ugu horreeyay ee bil aaba qabashada doorashada Xildhibaanna da Aqalka Sare, iyada oo diyaar garoow xoog an uu ka socdo magaalada Kismaayo ee Gobo lka Jubbada Hoose.
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax lagula beegsaday ciidamo deegaan ka tirsan Hiiraan
Waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ah qarax miino oo ka dhacay inta u dhax eeysa deegaanada Beergidiid iyo Coomaad oo u dhaxeeya magaaloyinka Baledweyne iyo Maxaas. Gaari ay saarnaayeen ciidamada dow lada iyo qaar kamid ah maleeshiyaadka Maca wisley da ayaa la sheegay inuu haleelay qarax miino wadada lagu aasay kaasoo sababy khas aare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Labo askari iyo mid kamid ah maleeshiy aadka Macawisleyda ayaa ku geeriyooday qa raxan halka qaar kalana ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa kadib uu dhacay iska horimaad hubeysan oo dhex mar ay CDFS kuwa Al-shabaab,balse lama oga kha saaraha ka dhashay is ka horimaadka.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Qaranka oo Xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dowladda Talyaaniga
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada JFS Md Xa san Macallin Khaliif oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Jamhuuriyadda Talyaaniga Md. Alb erto Vecchi ayaa kala hadlay xoojinta iskaashi ga labada dal.
Wasiiru Dowlaha ayaa xusay taageerada dowlad da Talyaaniga, gaar aha an mashaariicda horuma rineed ay la garab taagan yihiin shacabka iyo DFS, waxa uuna adkeeyay muhiimadda xiriirka qota da dheer ee ka dhaxeeya Talyaaniga iyo Soom aaliya.
"Shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed wax aa ka go’an xoojinta iskaashi ku dhisan horum ar iyo xiriir diblomaasiyadeed oo sal adag leh oo ka tarjumaya danaha labada shacab, waxaa na dowladda Talyaaniga iyo shacabkeeda uga mahadcelinayaa garab istaagga ay u muujiye en dalkeenna ”
Dhankiisa, Danjire Alberto Vecchi ayaa dowl adda Federaalka Soomaaliya ku bogaadiyey gu ulaha ay ka xoojisay dhinacyada amniga, kobc inta dhaqaalaha, dib u dhiska ciidamada, abuur idda fursadaha maalgashiga, la dagaallanka musuq-maasuqa iyo argagixisada.
Khilaaf ka dhax taagan guddiga doorashada heer Maamul Gobaleed ee HirShabeelle.
Khilaaf culus ayaa ka taagan guddiga doora shooyinka heer federaal ee Maamulka Hir Sha beelle ka dib markii maalmihii la soo dhaafay ay ku kala-tageen kulamo ay yeesheen.
Hirshabeele Guddiga ayaa is ku heesta xeer hoosaadkii ay is ku maamuli lahaayeen, ka as oo cadeynaya awoodaha xubnaha madaxda ah iyo guddi hoosaadyada.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegay xogyihii guddigii hore ee ku yimid magacaabista MW ho re ee HirShabelle Maxamed Cabdi Waare, ka as oo aan ilaa hadda xilkaas ka tagin uu soo je ediyay in xoghaya uu ka awood badnaado gu ddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenkiisa, is la markaana uu isaga maamulo guddi hoosaad yada iyo maamulka la xiriira doorashada.
Xubno kamid ah guddiga ayaa diiday soo je edintiisa oo aheyd in wax laga badalo Xeer-hoo saadka oo ay guddigaan kala simanyihiin dham maan guddiyada kale ee maamul goboledyada.
Masuulkaan oo la shegay inuu aad ugu dhow yahay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu maamulo wax kasta oo guddiga ku aadan, iyadoo inta badan xubnaha ku guddiga na ay arrintaas ku raaceen.
Guddoomiyaha guddiga ayaa sidoo kale og ol in uu dhamaan awoodihiisa hoos geeyo xog yahaha gudigga.
Madaxweynaha Maamulka HirShabeelle Ca li Cabdullaahi Xuseen "Guudlaawe” ayaa la fil ayaa in maalmaha soo socda uu lakulmo xubna ha guddiga islamarkaana uu xal u raadiyo khil aafka ka dhax jira.
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Waf di ka socda QM
M/Garowe ee Xarunta G/Nugal waxaa Shalay gaaray wafdi ay hoggaamineyso Ku-xigeenka Ergayga Q/Midoobey ee Soomaaliya Anita Kiki Gbeho, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyay. Wafdiga ayaa waxaa Qasriga Mad axtooyada Puntland ee M/Garoowe ku qaabilay Madaxw eyne Saciid C/hi Deni, iyaga oo ka wa da hadl ay guud ahaan xaaladda Soomaaliya, oo ay u gu horeyso arrimaha Doorashooyinka oo la fil ayo in Aqalka Sare ay dhowaan bilaa ban. Kula nka ayaa waxaa goobjoog ka oo ka qeyb galay Mad axweyne ku-xigeen ka Axm ed Cilmi Cismaan Karaash, Xubno ka mid ah G/Wasiira da iyo Xafiiska Qaramada Mido obey ee Puntl and.
Taliska Booliska Degmada Guriceel oo Amarro soo saaray
Taliyaha Ciidanka Booliiska D/Guriceel ee G/ Galgaduud Cismaan Cali Hudeey oo Amarada soo saaray ayaa marka hore sheegay in Amn iga guud ee degmada uu yahay mid wanaags an, isla markaana ay ka wada Shaqeeyeen Ciid amada & Shacabka.
Taliyaha ayaa ku dhawaaqay Amaro la xirii ra dhanka amniga, kuwaas oo lagu soo rogay bulshada degmada ku nool, sida gaadiidleeyda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Waxaa uu ku amray gaadiidka aada dhinaca degmada Guriceel in muddo 15 Cisho gudaho od ah ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kale in Caruurta ka yar 15 sanno aysan socon karrin Magaaladda wixii ka danbeeya 09 fiidnimo kadib markii ay soo bateen Carruurta dhagaanta ku tuuraya Gaadiidka.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ee Gobolka Galgaduud Cismaan Cali Hudeey a yaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab.
Ammaradaan kasoo baxay Taliyaha Ciidan ka Booliiska D/Guriceel ee G/Galgaduud Cisma an Cali Hudeey ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab la she egay inay kusoo dhawaadeen D/Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Ramla Cali oo looga adkaaday ciyaartii feer ka ee Olympicada Japan
Ramla Cali oo ciyaaraha feerka ee hablaha ku meteleysay Somaliya, tartanka Olympicada ee ka soconayo Magaalada Tokyo ee dalka Ja pan ayaa looga adkaaday ciyaartii feerka, ee
ay Shalay ku wajahday Maria Claudia Nechita, oo ka socotay dalka Romania.
Ciyaarta feerka oo ciddii laga adkaadaa ay tartanka isaga hareysay ayaa shan dhibcood iyo waxba (5-0) waxaa ay guusha ku raacday Maria Nechita. Ramla Cali oo noqonayso gabadhihii ugu ho reysay ee Somaliya ku metesho ciyaarta feerka ee Olympicada adduunka ayaa muujisay dad aal iyo firfircooni, waxaana laga dheehan karay inay aad u deganeyd, iyadoona isku dayeysay inay meelo muhiim ah feerka kaga dhufato ga badhii ay feertamayeen, inkastoo aad mooddo in xagga weerarka looga gacan-sareeyay.
Feerkan ayaa feerarka kale ee dunida laga ciyaaro, sida kan miisaanka culus oo kale wax aa uu kaga duwan yahay, iyadoo ciyaaryahan ka loo xisaabiyo dhibco, lagu saleynayo meel aha uu feerka kaga dhufto ciyaaryahanka kale iyo habka uu isaga caabiyo weerarka kaga ima anaya.
Faadumo Cali Nuur oo hoggaamineysay ci yaartoyda Somaliya ee ku sugan dalkaasi Jap an ahna Gudoomiye Kuxigeenka 2aad ee Gudd iga Olombikada Soomaaliyeed ayaa Ramla ku amShalayy inay soo bandhigtay ciyaar wanaa gsan.
"Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi ka ro waa looga adkaaday ma jirin, laakiin nasiib baa looga adkaadaa dhihi karaa. Way dada shay, qaybtii 1aad iyo tii 2aad ee ciyaarta, si fii can bayna u ciyaartay, qaybtii 3aad ayaa xoo gaa meelo laga taa-taabanayay, sidaas ayaa lo oga dhibco batay.” Ayay tiri Faadumo Cali oo la hadashay VOA.
Faadumo Cali ayaa xustay inaanay ciyaar kale u harin Ramla, oo ciyaaryahankii laga ad kaadaa uu isaga harayo tartanka, iyadoona tiri "Ciyaar kale uma harin, qofkii laga badiyaa waa harayaa.”
Somaliya ayaa waxaa u harsan tartanka oro dada ee 1500 mitir, oo 3-da bisha soo socoto ee August uu u ordi doono Cali Iidow Xasan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo qaabilay James Swan
Madaxweynaha J/Jabuuti, Ismaaciil Cumar Ge elle ayaa Axaddii Dorraad M/Djibouti ku qaabilay Wakiilka QM u qaabilsan arrimaha Somaliya, Am b.James Swan oo booqasho ku joogga dalkaasi. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee Somaliya, gaar ahaan doorashooy inka ku soo foolka leh dalka.
James Swan oo kulankaasi ka dib la hadlay Warbaahinta ayaa sheeg ay in Madaxweyne Geelle ay isla soo qaadeen in la texgeliyo heshiiskii 27-kii May, ee ku qotomay doorashooyinka dalka.
"Booqashadan waxay si gaar ah ugu saabsan tahay in wadatashiyo aan la yeesho madaxda sa re ee reer Jabuuti, si aan isaga xog-wareysano xa aladda Somaliya iyo inaan isla wadaagno wa-xo ogaa aragtiya.” Ayuu yiri James Swan.
Waxa kaloo uu yiri "Sidoo kale waxay boo qash adan qayb ka tahay booqashooyin dhowra, oo aan qaban-qaabinayo toddobaadyadan, kuna ma rayo dalal ay saaxiibo yihiin Somaliya, oo xitaa ay ka mid yihiin wadama da Bariga Dhexe.”
Swan ayaa intaa ku daray "Md Geelle waxaan isla soo hadalqaadnay muhiimadda ay leedahay in la texgeliyo, isla-markaana la dhaqangeliyo he shiiskii 27-kii May, ee ay kala saxiixdeen DFS & Madaxda D/Goboleedyada, oo ah tubta loo mar
ayo doorashada lagu wada qanacsan yahay.”
QM Iyo Midowga Yurub Oo War Kasoo Saaray Dhacdooyinka Ka Socda Tuunis
Q/Midoobey ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada siyaasiyiinta ee dalka Tuunis inay ka fogaadaan rabashad iyo in dalka uu galo fowdo.
Afhayeenka xoghayaha guud ee Qaraamda Mi doobe Farxaaan Xaq ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ugu baaqeyso dhinacada isku khila afsan siyaasadda dalkaTuunis inay xaaladda dej iyaan kuna dhamaeeyaan khilaafka jira si xigmadeysan
Afhayeenka ayaa ka gaabsaday inuu afgenbi ku tilmaa mo wixii Habeen hore ka dhacay dalka Tuunis. Dhinaca kale, Midowga Yurub ayaa ugu baaqay madaxda Tuunis in la ixti raamo dastuurka iyo sharciyada u yaal dalka. Nabiila Misraali oo u ah Midowga Yurub afhayeen ayaa sheegtay in ururka Midowga Yurub si hoose ula socda dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee dalka Tuunis.
Madaxweynaha Tuunis ayaa Habeen hore xilka ka qa aday ra’iisal wasaarihii dalkaas. Isagoo sidoo kal ena joojiyay dhamaan howlihii baarlamaanka dal kaas Madaxweyne Qeys Saciid ayaa Shalay sidoo kale xilka ka qaaday wasiirada caddaladda iyo difaaca ee dalkaas
Afhayeenka ayaa ka gaabsaday inuu afgenbi ku tilmaamo wixii Habeen hore ka dhacay dalka Tuunis. Dhinaca kale, Midowga Yurub ayaa ugu baaqay madaxda Tuunis in la ixtiraamo dastuurka iyo sha rciyada u yaal dalka.
Nabiila Misraali oo u ah Midowga Yurub afhay een ayaa sheegtay in ururka Midowga Yurub si hoose ula socda dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee dalka Tuunis.
Madaxweynaha Tuunis ayaa Habeen hore xilka ka qaaday ra’iisal wasaarihii dalkaas. Isagoo sidoo kalena joojiyay dhamaan howlihii baarlamaanka dalkaas Madaxweyne Qeys Saciid ayaa Shalay sidoo kale xilka ka qaaday wasiirada caddaladda iyo difaaca ee dalkaas
Faah Faahin:-Dad Ku Dhintay Roobab Dabe ylo Wata Oo Ka Da’ay Jubbada Hoose
Roobab xoogan oo dabeylo wata ayaa saa cadihii lasoo dhaafay ka da’ay Magaalada Kis maayo ee Xarunta G/Jubbada Hoose iyo deeg aano kale oo ka tirsan Gobolkaas, waxaana ro obabka ka dhashay kha saaro nafeed.
Roobka oo da’ayay saa cado xiriir ah ayaa saameyn ku yeeshay isku soc odka gaadiidka iyo dadka ee Kismaayo iyo dee gaanada xeebta, waxaana soo dumay Guryo ku yaalla qeyb kamid ah xaafadda cananley ee Mag aaladaas oo degan yihiin qoysas danyar ah.
Wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga DG/J Jubba land Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in roobab dabeylo watay ay ka da’een Kismaayo iyo deegaano kale oo ku teedsan xeebta Gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa uu sheegay Wasiir ku-xigeenka ayaa in 2 qof oo kalluumeysato ah ku geeriyoodeen bad da, ka dib markii ay la degtay Doon ay saarnaye en, halka saddex kalena laga soo badbaadiyey, kuwaasi oo badda dabeylo ku kicisay.
Sidoo kale Maxamed Cumar ayaa Carabka ku dhuftay inay jirto cabsi xoogan oo ay dareemaya an dadka kunool dhulka xeebta ee G/J/Hoose, is la markaana ay jiraan guryo dhowr ah oo ku dum ay dabeysha roobabka, isagoo dadka ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan.
Wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga Jubbaland ayaa Digniin u diray kalluumeysatada, wuxuuna sheegay in ciddii aada Badda xiligaan ay ka qaadi doonan tallaabo sharci ah, maadaama ay da’aya an roobab dabeylo wata, laguna jiro bad xiran. Xigasho:radiodalsan.com
Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay Nin ka tirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay <